DLULA ISardinia Photoreal FSX & P3D part3 - Rikoooo
Usayizi 757 MB
Play 28 407
Umbhali: Diego PapaRella
Ingxenye yesithathu ye-mega isithombe sangempela se-Sardinia se FSX ne-Prepart3D v1 & v2. Ukuze uthole imininingwane engaphezulu mayelana nokubuka kwenkundla ikhasi okuyingxenye 1. Lokhu nobuhle bendawo ihlukaniswe yaba izingxenye 4 ngenxa yobukhulu bayo okungukuthi licishe lifane, ezingaphezu kuka 5 GB isiyonke. 4 izingxenye zimelela Sardinia lilonke. Nokho, By ukulanda zonke izingxenye uyothola indawo ephelele, amaqembu akuzona sincike omunye komunye, futhi ngaleyo ndlela ingasetshenziswa ngokwehlukana.
Lokhu kulanda sinzima 757 MB uma ungeyena Jumbo Ilungu alindele ukuba ulinde amahora ambalwa thwebula .. Le ezinobuhle waba yizinqamu 2, emva thwebula unzip konke kufolda bese uchofoza on sardinia_photoreal_part3.exe ukuqala ukufakwa okuzenzakalelayo.
EZINYE IZINGXENYE indawo ezungezile
Le ngxenye kuhlanganisa izindawo ezilandelayo: Gulf of Oristano, LIER Airport (Oristano - Fenosu), Bosa, Is Arutas beach, Abbasanta futhi Capo Frasca (AWTI - Air Izikhali Training Ukufakwa)
Ngezansi, lena Indawo ehlanganiswa wonke ezinobuhle (4 izingxenye) kulandele endaweni ehlanganiswa Ingxenye 3.
Qedela scenery Scenery inxa 3 (lokhu thwebula)
ILebanon Photoreal FSX & P3D